Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny mpandraharaha Superjet 100 lehibe faharoa an'ny Rosia dia nandatsaka ny fiaramanidina, manafoana ny fividianana vaovao
Nanambara ny fanapahan-keviny hanafoana ny fividianana fiaramanidina 10 Sukhoi Superjet 100 ny mpitatitra isam-paritra rosiana Yamal Airlines, iray andro taorian'ny nianjeran'ny iray tamin'ireo fiaramanidina, izay tantanin'i Aeroflot, ary nirehitra tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Moskoa.
Nanambara ny fanapaha-keviny i Yamal taorian'ny nandavan'ny minisitry ny fitaterana an'i Russia hampidina ny fiaramanidina ho valin'ny lozam-pifamoivoizana Sheremetyevo.
Superjet 100 an'ny Aeroflot no nianjera tamin'ny afo sy setroka tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sheremetyevo any Alahady. Niala tao Sheremetyevo ny fiaramanidina ho any Murmansk, saingy nanambara ny vonjy taitra ny mpanamory fiaramanidina ary niverina tany Moskoa, ary nirehitra ny fiaramanidina rehefa tonga mafy. Mpandeha miisa 40 sy mpikambana iray ao amin'ny ekipa no maty tamin'io loza io.
Yamal dia miasa ao amin'ny fiaramanidina 15, ary izy no mpiasan'ny Superjet 100 lehibe indrindra ao Rosia aorian'ny fiaramanidina nasionaly Aeroflot.
Nilaza ny Yamal Airlines 'fa ny fanapahan-kevitra handatsaka ny fiaramanidina dia tsy nifandray tamin'ny loza tamin'ny Alahady. Ny Tale Jeneraly Vasily Kryuk dia nilaza fa lafo loatra ny fandaniam-bola amin'ny Superjet 100 amin'ny vatana tery.